दरिद्रता हुन बाट बच्नको लागि के गर्ने? घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विहानै गरौं यी काम – जानीराखौ -Dainikplus-
दरिद्रता हुन बाट बच्नको लागि के गर्ने? घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विहानै गरौं यी काम – जानीराखौ
By Dainik Plus On October 8, 2019 In Parent Category
तपाई शास्त्रमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ? शास्त्रका अनुसार जीवनमा आत्मअनुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै केही नियमको उल्लेख गरिएको छ।शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरुको जसको पालना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा यस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ जुन गर्नु हुँदैन। यस्ता काम गर्दा करोडपति पनि कङ्गाल हुने शास्त्रमा उल्लेख छ।-यी तिथिमा भुलेर पनि नगर्नु मालिस र यौन कार्य हिन्दु पाञ्चाङ्ग अनुसार कुनै पनि महिनाको औंशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी र अष्टमी तिथिमा तेल मालिश र मांसाहार गर्नु हुँदैन । यी तिथिमा यौन कार्य गर्नु पनि अशुभ मानिन्छ। अझ परपुरुष वा परस्त्रीसँग त भुलेर पनि संगत गर्नु हुँदैन ।-जमिनमा राख्नै नहुने कुरा शास्त्रमा बत्ति, शिवलिङ्ग, शालिग्राम, मणि, देवी-देवताका मुर्ति, जनै, सुन र शंख कहिले पनि भुइँमा राख्न नहुने उल्लेख छ । यिनलाई भुइँमा राख्नै परेपनि कपडा बिच्छ्यार राख्नु पर्छ ।
-पुजाको समयमा वा विहान साँझ यौन सम्बन्ध वर्जित शास्त्रमा दिउसोमा पनि पुजाको समयमा वा विहान साँझ यौन सम्बन्ध वर्जित छ । यी समयमा यौन क्रिडामा लिप्त हुँदा अनेक प्रकारका रोग लाग्ने र अशुभ हुने उल्लेख छ।-सूर्य र चन्द्रमा अस्ताउँदा हेर्नु हुँदैन सूर्य र चन्द्रमा अस्ताको समयमा हेर्न त्यस दिशामा हेर्न नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्तो समय अशुभ मानिन्छ । यस्तो दृष्य हेर्दा आँखामा समेत समस्या आउन सक्छ।-यिनीहरुलाई कहिल्यै तल नपार्नुस् आफ्ना बाबु, आमा, पुत्र, पुत्री, पत्नि, पति, गुरु, अनाथ स्त्री, बहिनी, भाई, देवी-देवता र ज्ञानी ब्यक्तिलाई अनादर गर्नु अशुभ मानिन्छ । यी ब्यक्तिको अनादर गर्दा अशुभ हुने र धननाश एवं दरिद्र्ता बढ्ने उल्लेख छ।-घरमा प्रवेश गर्दा सँधै ख्याल गर्नुस् जव बाहिरबाट घर आइन्छ त्यतिबेला सिधै भित्र प्रवेश गर्नु अशुभ मानिन्छ । जहिले पनि बाहिर बाट आइसकेपछि बाहिर खुट्टा सफा गरेर मात्र घर भित्र प्रवेश गर्नु पर्छ ।
वास्तु टिप्स : घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विहानै गरौं यी काम
वास्तु शास्त्र आफैमा एक विज्ञान हो । हुन त वास्तुको, आध्यत्मको कुरा गर्दा आधुनिक पुस्ताले यसलाई सोझै अस्विकार गर्छ । उनीहरुलाई लाग्छ, यी आडम्बर कुरा हुन् । पुरातन सोंच हुन् ।तर, यसभित्र पनि विज्ञान हुन्छ । वास्तु शास्त्रले निर्देशित गर्ने कुरा व्यार्थ हुँदैनन् । यद्यपी उक्त निर्देशनको आशय के हो र त्यसको प्रभाव के रहन्छ भन्ने कुरा केलाउन सक्नुपर्छ । वा बुझ्न सक्नुपर्छ ।हामीकहाँ बिहान उठ्नसाथ पूजापाठ गर्ने चलन छ । तुलसीको मठमा पानी चढाउने । शंख-घण्टी बजाउने । मन्त्रोच्चारण गर्ने । भगवानको नाम जप्ने । यी तमाम कर्मले हाम्रो मनको शुद्धिकरण गर्छ । सकारात्मक भाव पैदा गर्छ । मन शान्त, खुसी र सकारात्मक हुन्छ । यी कर्म गरिरहँदा हामी बिनयी, बिनम्र हुन्छौं । फलतः दिनभर यसको सकारात्मक भाव हामीभित्र रहिरहन्छ ।
वास्तु शास्त्र अनुसार हामीले दिनको सुरुवात नै राम्रो ढंगबाट गर्नुपर्छ, तब मनमा शान्ति छाउँछ । परिवारमा सुख आउँछ । भनिन्छ नि, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । हामीले बिहानीको कर्म जुन ढंगबाट सुरु गर्छौं, त्यही अनुरुप हाम्रो दैनिकी गुज्रन्छ । यसर्थ दिनको सुरुवात सही ढंगबाट गर्नुपर्छ, जसले दिनभरका लागि हामीमा उत्साह, उमंग र उर्जा जागिरहोस् ।
भलै यसका लागि स-सना कुराले पनि भूमिका खेल्छ । जस्तो बिहान उठ्नसाथ तपाईंले बाथरुम छिर्नुभयो, प|mेस हुन नपाई ट्यांकीमा पानी सकियो । नतिजा के हुन्छ, तपाईको मुड खराब । यसको राप त्यही क्षण सेलाउदैन, बरु दिनभर नै रहन्छ ।अतः यस्ता संभावित कामबाट बिहानको सुरुवात गर्न ठिक हुँदैन, जसले मुड खराब गराउँछ ।मनमा अशान्ति पैदा हुने, घरमा कलह हुने, साथीभाईसँगको सम्बन्ध खराब हुने कारणमा बिहानीको सुरुवातलाई पनि मानिन्छ । वास्तुशास्त्रले भन्छ, पारिवारिक अशान्तिको कारण भनेकै गलत तरीकाले दिनको सुरुवात गर्नु हो ।वास्तु अनुसार दिनको सुरुवात सही ढंगले गर्नर्का लागि बिहान के के गर्नु हुन्छ, के कस्ता काम गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी राख्न जरुरी छ । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि घरमा सुख समृद्धि कायम राख्न सकिन्छ ।
दिनको सुरुवात राम्रो तरिकाले होस् भन्नका लागि कति व्यक्तिको चाहना हुन्छ, केही राम्रो हेरौं । यही मनोवृत्तिले गर्दा कति मानिस आˆनो सुत्ने कोठामा आकर्षक एवं उमंगमय भावको तस्विर टास्ने गर्छन् । कतिले शयन कक्षाको सामुन्नेमा ऐना राख्ने गर्छन् ।तर, वास्तुशास्त्रले बिहान उठ्नसाथ ऐना हेर्नुलाई राम्रो मानेको छैन । जब हामी ऐनामा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्छौं, मनमा सकारात्मक भाव जाग्दैन ।
दोश्रो व्यक्तिको अनुहार हेर्नु
‘बिहान बिहान कसको अनुहार हेरिएछ, पुरै दिन खराब भयो’, कतिपय अवस्थामा यो वाक्य हामी पनि बोल्छौ । किनकी वास्तु शास्त्रमा भनिएको छ, बिहान उठ्ने वित्तिकै अन्य व्यक्तिको अनुहार हेरेमा उनीहरुको नकारात्मक उर्जा तपाईमा पर्छ । यसले पनि हाम्रो दैनिकी प्रभावित हुन्छ ।
लडाई झगडा गर्नु
वास्तुशास्त्र अनुसार दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचका साथ गर्नु गर्छ । त्यसैले विहान विहान कसैसँग झगडा गर्नु, नमिठो वचन बोल्नु, खराब चिन्तन गर्नु हुँदैन ।जनावरको नाम लिनुवास्तु शास्त्रले के भन्छ भने खाना खानुअघि कुनै पनि पशु वा गाउँको नाम लिनु हुँदैन । वस्तुशास्त्रमा यसलाई अशुभ मानिन्छ
त्यसो भए वास्तु अनुसार विहान उठ्ने वित्तिकै के गर्ने ?माता पिताको खुट्टा ढोग्ने
मातापिता भनेको जगतजननी हुन् । जगतजननी भएकै कारण उनीहरुमा दिव्य शक्ति हुन्छ । र, उक्त दिव्य शक्ति मातापिताद्धारा नै प्राप्त गर्न सकिने हुदाँ त्यसलाई हासिल गर्न पनि मातापिताको खुट्टा ढोग्नु पर्छ ।त्यसबाहेक, मातापिता प्रति सम्मान प्रकट गर्न तथा मातापिताबाट आर्शीवाद प्राप्त गर्न पनि वास्तुशास्त्रका आधारमा विहान उठेर सबैभन्दा पहिले माता पिताको खुट्टा ढोग्नसपर्छ । त्यस्तै, आˆनो हस्तरेखा हेरेर भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ । यसले घरमा सकारात्मक माहोल पैदा गर्नुका साथै व्यक्तिमा आत्मविश्वास जगाउँछ ।
तुलसीलाई जल चढाउने
घरमा तुलसी रोप्नु धार्मिक दृटिले मात्र नभई आध्यात्मिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत लाभदायक मानिन्छ । यसले बाताबरण शुद्ध रहनुका साथै ज्ञान, विवेक, सुख, सम्पत्ति तथा स्वास्थ्यमा वृछि हुन्छ । भनिन्छ, जुन घरमा तुलसीको वास हुन्छ, उक्त घर सुखी हुनुका साथै स्वस्थ रहन्छ ।त्यसैले पनि विहान उठ्ने वित्तिकै तुलसीलाई जल चढाउनु पर्छ । यसले घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह हुनुका साथै स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ ।घरमा तुलसीको पानी चढाउनेविहानको स्नान पश्चात्त तामाको लोटामा जल भरेर त्यसमा तुलसीको पत्ता राख्नु पर्छ । अब यसलाई घरको मुख्य द्धार तथा प्रत्येक कोठामा छर्किन पर्छ । यसो गर्नाले घरको नकारात्मक उर्जा नष्ट हुन्छ ।
घरमा विहान सबेरै दियो बाल्नाले सकारात्मक उर्जाको पवेश हुन्छ । साथै, यसले पैसा सम्बन्धि समस्या समेत हटेर जन्छ । यसबाहेक, घरकी महिलाले एक लोटो पानी घरको मुख्य द्धारमा राखेको खण्डमा घरमा लक्ष्मीको आगमन हुन्छ ।घर बाहिर रंगोली बनाउनेसंभव भएसम्म बिहान सबेरै घरको आगँनमा रंगोली बनाउनाले घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवेश गर्छ ।
भाग्यमानीलेमात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप एक शेयर गर्नुहोस तपाईको जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ !